ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးအတွက် အစားအစာများ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ကျန်းမာရေးနဲ့ အာဟာရ » ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးအတွက် အစားအစာများ
ခန္ဓာကိုယ်၏ တခြားအစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့ပင် ဦးနှောက်သည်လည်း တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ပြောင်းလဲပါသည်။ အသက် ၂၀ ပြည့်ခါနီးသည်နှင့် ဦးနှောက်ကြီးရင့်မှုဖြစ်စဉ်ကို စတင်ခံစားရပြီး တစ်ချို့အာရုံကြောဆဲလ်များ ဆုံးရှုံးရပါမည်။
သို့သော် သုတေသနများက နေ့စဉ် အစားအသောက်များ၌ စမတ်ကျသည့် အစားအသောက်များကို ထည့်သွင်းစားသုံးလျှင် အသက်ကြီးသည့်တိုင် ကျန်းမာသောဦးနှောက်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်း သက်သေပြထား၏။
သုတေသီများက ဘလူဘယ်ရီပါသော အစားအသောက်များသည် သင်ယူမှုနှင့် လုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ စွမ်းရည်းများကို တိုးတက်စေကြောင်း တွေ့ထား၏။ ဘလူးဘယ်ရီများသည် ဦးနှောက်အား ဓာတ်တိုးစေမည့် ဖိစီမှုများဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးပြီး အသက်ကြီးခြင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများဖြစ်သည့် အဲလ်ဇိုင်းမားရောဂါ သို့မဟုတ် ဒီမန်းရှားရောဂါများကို လျော့ချပေးနိုင်ကြောင်း သက်သေပြထားပါသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များက ဒိန်ချဉ်၊ အုတ်ဂျုံ သို့မဟုတ် မနက်စာတို့တွင် ဘလူးဘယ်ရီ တစ်ခွက်စာ ထည့်စားပေးခြင်းဖြင့် ဦးနှောက်ကြီးရင့်မှုအား လျော့ချပေးနိုင်မည်ဟု ဆိုသည်။
ဆာမွန်ငါး၊ ရေနက်ပိုင်းတွင်နေသောငါးများသည် အဆီအက်စစ်များကြွယ်ဝပြီး ဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် လိုအပ်သော အိုမီဂါ ၃ အဆီများ ပါရှိပါသည်။ အိုမီဂါ ၃ တွင် ရောင်ရမ်းမှုကိုကျစေသည့် ဂုဏ်သတ္တိလည်းရှိသည်။ ဆာဒင်းနှင့် ပင်လယ်ငါးသလောက်လို အဆီပါသည့် ငါးများတွင် ထိုအဆီဓာတ် ပါရှိပါသည်။
ဗင်တာမင်အီ ပေါများစွာပါသော ခွံမာသီးများနှင့် အစေ့အဆန်များသည် အသက်ကြီးသာသည်နှင့် သတိရှိမှု ကျဆင်းသွားခြင်းအား နည်းပါးသွားအောင် အကူအညီပေးပါသည်။ ခွံမာသီးများကို လှော်ထား ဖုတ်ထားစသည့် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် စားသုံးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆီးချိုသမားများကတော့ ခွံမာသီးများတွင်ပါသော ဆားပမာဏကို သတိပြုရပါမည်။
ထောပတ်သီးနှင့် ဘလူးဘယ်ရီသီးများသည် ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေသော အကောင်းဆုံးအစားအစာများဖြစ်သည်။ ထောပတ်သီး၌ အဆီများပါသော်လည်း မပြည့်ဝဆီများသာဖြစ်သောကြောင့် သွေးစီးဆင်းမှုကို ကောင်းမွန်စေပါသည်။ ထောပတ်သီးသည် သွေးဖိအားကို ကျစေနိုင်သောကြောင့် သွေးတိုးကိုကျစေပြီး ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေပါသည်။ ထောပတ်သီး၌ ကယ်လိုရီ အများအပြားပါသည်ကို သိထားပါ။ သိပ္ပံပညာရှင်များက တစ်ရက်လျှင် အလုံးဝက် သို့ တစ်လုံး၏ ၄ပုံ၁ပုံသာ စားသင့်ကြောင်း ညွှန်ကြားထားပါသည်။
သလဲသီးဖျော်ရည်များတွင် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်ပေးပြီး အထူးသဖြင့် ဦးနှောက်ကို ဓာတ်တိုးပစ္စည်းများနှင့် မထိမိစေရန် ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ချဉ်သောအသီးများနှင့် အရောင်စုံသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ဦးနှောက်ဓာတ်စာဟု သတ်မှတ်ကြသည်မှာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
လက်ဖက်ရွက်တွင် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင့်ပစ္စည်းများပါပြီး အထူးသဖြင့် သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းစေသော catechines အမျိုးအစားများ ပါ၏။ သို့သော် လက်ဖက်ရွက်ကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကြိုချက်ရန်လိုသည်။ အခြောက်မှုန့်များ သုပ်စားသည့်လက်ဖက်များတွင်တော့ ဘယ်ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းမှ ပါမည်မဟုတ်ပါ။
ချောကလက်အမည်းများတွင် ဖလာဗိုနွိက်များပါပြီး ဦးနှောက်ကို အမှန်အားမြှင့်ပေးနိုင်သော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် သဘာဝလှုံစော်ပစ္စည်းများဖြစ်သည် ကဖိန်းဓာတ်ပါပြီး အာရုံစိုက်အားကောင်းစေကာ စိတ်အခြေအနေကို တိုးတက်စေပါသည်။ ပန်းသီး၊ အနီရောင်နှင့် အညိုရောင် စပျစ်သီများ၊ ၀ိုင်နီ၊ ကြက်သွန်နီ၊ လက်ဖက်ရွက်နှင့် ဘီယာတို့သည် ဖလာဖိုနွိက်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများဖြစ်သည်။
ကိုက်လန်၊ ဟင်းနုနယ်၊ ပန်းမုန်လာစိမ်းတို့တွင် ဗီတာမင်အီးနှင့် ဖောလစ်အက်စစ်များ ကြွယ်ဝ၏။ အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းရွက်များသည် သွေးတွင်းမှ ဟိုမိုစစ်စတီရင်း အမိုင်နိုအက်စစ်ကို လျော့ချစေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအက်စစ်သည် သွေးတွင်း၌ များပြားလာပါက ဦးနှောက်အတွင်းရှိအာရုံကြောဆဲလ်များကို သေစေနိုင်ပြီး နှလုံးရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
အတက်ရောဂါရှိသော လူတစ်ယောက်အတွက် ရှောင်ကျဉ်ရမည့် အစားအစာများ
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဒီဇငျဘာ 24, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဒီဇငျဘာ 24, 2017
Eat smart forahealthier brain. http://www.webmd.com/diet/features/eat-smart-healthier-brain#1. Accessed on March 12, 2017.
9 foods that may help save your money. http://www.health.com/health/gallery/0,,20434658,00.html. Accessed on March 12, 2017.
The best foods for your brain. http://www.prevention.com/food/healthy-eating-tips/the-best-foods-for-your-brain. Accessed on March 12, 2017.
နောက် ၁၀ နှစ်ကြာရင် ကျန်းမာပျော်ရွင်နေတဲ့ သင် ဖြစ်ဖို့ ဒီ အမူအကျင့်တွေကို ရှောင်ပါ။ ။
ရဲယို နဲ့ ကျန်းမာရေး
ကျန်းမာရေးအတွက် မဟာမိတ်ဖက် ပျော်ရွင်ခြင်း စစ်တပ်။ ။